त्रिविद्धारा भर्खरै नतिजा प्रकाशन, श्रावणमा परीक्षा तोकेर फारम भर्ने बारे सूचना समेत जारी [ सूचनासहित ] - Nepali in Australia
काठमाडौ । त्रिभुवन विश्व विद्यालय भर्खरै नतिजा प्रकाशन गरेको छ । साथै परीक्षा फारम भर्ने बारे सूचना समेत जारी गरेको छ ।अहिले भरिएको फारम श्रावण महिनामा नै परीक्षा गर्नेगरी परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिने जानकारी समेत गराइएको छ ।
भर्खरै जारी सूचनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना जारी गरेको हो ।सूचनामा भनिएको छ यस अध्ययन संस्थानको परीक्षा समितिको बैठकको निर्णयानुसार २०७७ साल पौष महिनामा सञ्चालित वि.एस्सी. कृषि प्रथम सत्रान्त र फाल्गुन महिनामा संचालित वि.भि.एस्सी. एण्ड नवौ सत्रान्तको नियमित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको छ ।
निम्न परीक्षा रोलनम्वरका परीक्षार्थीहरु आफू सम्मिलित भएको सम्पूर्ण विषयमा उत्तीर्ण घोषित भएका छन् । थप सूचनामा नै हेर्नुहोला ।अर्को सूचनापनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले नै निकालेको छ ।
सूचनामा त्रिवि सत्रान्त परीक्षा प्रणाली अनुरुप यस अध्ययन संस्थान अन्र्तगत निम्नलिखित तहहरुको पुनः नियमित परीक्षा २०७८ साल श्रावण महिनामा सञ्चालन गरिने भएको हुँदा मिति २०७८ / ०३ / ११ देखि ऐ २५ गतेसम्म हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो २ (दुई) प्रति सहित रितपूर्वकको परीक्षा आवेदन फारम भरी सम्बन्धित क्याम्पसमा बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
परीक्षा तालिका सम्बन्धि कार्यक्रम पछि प्रकाशित गरिने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । थप सूचनामा नै हेर्नुहोला ।